Noopept (GVS-111) ntụ ntụ (157115-85-0) hplc ma98% | AASraw
/ ngwaahịa / Nootropics ntụ ntụ / Noopept (GVS-111) ntụ ntụ
Rating: SKU: 157115-85-0. Category: Nootropics ntụ ntụ
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Noopept (GVS-111) dị na ya (157115-85-0), n'okpuru ụkpụrụ CGMP na usoro nchịkwa mma.
Noopept (GVS-111) ntụ ntụ bụ otu n'ime ike nootropics dị na ahịa taa. Ọ na-enye mmụba na cognition zuru oke ma nwee obere mmetụta psychostimulatory. N'adịghị ka ọtụtụ nootropics, nsonaazụ Noopept na-ebido n'ime obere oge ịmịnye ya na-eme ka ọ bụrụ nhọrọ kachasị mma tupu ọrụ chọrọ uche.
Noopept (GVS-111) uzuzu uzuzu
Noopept (GVS-111) ntụ ntụ bụ isi ihe
aha: Noopept (GVS-111) ntụ ntụ
Usoro Molecular: C17H22N2O4
Molekụla arọ: 318.37
Noopept (GVS-111) ntụ ntụ na ntanye ọgwụ na SMART
Noopept powder bụ aha akara maka N-phenylacetyl-L-prolylglycine ethyl ester, mgbagwoju anya syntheticnootropic.
N'ihi ike ya dị egwu, usoro ọgwụgwọ a na-atụ aro nke Noopept ntụ ntụ dị ntakịrị, na-emekarị 10 ka 20 mg dịka ugboro atọ kwa ụbọchị. Ngwakọta ekwesịghị igafe 40 mg na oge 24.
Ebe ọ bụ na ahụ na-eme ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, na o nwere obere ndụ n'ime ahụ mmadụ, ọ ka mma iji ọtụtụ obere doses na otu nnukwu dose iji gbasaa Noopept ntụ ntụ nnukwu mmetụta.
Mgbe ịmalite na Noopept ntụ ntụ, anyị nwere ike ịmalite site na ntinye kachasị dị irè, jiri nlezianya nyocha, tupu ịmalite usoro ọgwụgwọ. Onye obula kwesiri ikpebi onodu ogwu ha.
Na ntụ ntụ, a na-etinyekarị ntụ ntụ Noopept n'okpuru ire ma ọ bụ jikọta ya na mmiri na mmanya. Mmetụta dị ngwa ngwa mgbe ochichi gasịrị, dịka ngwa ngwa dị n'ime oge 15.
Dị ka akwụkwọ ntanetị nke na-abata na ntinye ihe ntinye na Russia, a na-atụ aro ka ị wepụ Noopept raw ntụ ntụ maka izu 1.5-3, mgbe ahụ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịmalite ọkpụkpụ ọzọ mgbe izu nke 1 gasịrị. N'aka ozo, otutu ndi oru nootropic na-agbaso usoro 56 na 4 ụbọchị.
A naghị atụ aro ka iwere Noopept ntụ ntụ n'oge mbubreyo ka mmetụta ya na-emetụta ike nwere ike igbochi ụra.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịtụ Anya na GVS-111 ntụ ntụ (CAS 157115-85-0)
Nchekwa na Ịmụta
Enweghị uru ọ bụla a na-arụ na noopept powder bụ otú ọ ga-esi welie ebe nchekwa ma melite usoro mmụta. Ngwunye noopept, dị ka Piracetam, na-enyere aka na nchịkọta nke nchekwa, mana enweghi uru ndị ọzọ na-abịa na njedebe, nke bụ nkwenye ncheta na ntinye ncheta. Noopept ntụ ntụ na-emezi nlekọta kwesịrị ekwesị nke ụdị ihe ọ bụla nke ụbụrụ dị ka ụbụrụ ha na-edozi, nke na-enye ohere maka ncheta ncheta dị mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ihe nrịba ama na a na-edozi anyị site n'echiche anyị ka a na-eme ka ọ dị mfe ka a na-eburu ha n'obi anyị n'ụdị ncheta.
Site n'iji Noopept powder mee ihe, ị ga-achọpụta na ị nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ ma mee ya ngwa ngwa maka iji mee ihe kwa ụbọchị. Ịnwere ike ọbụna cheta aha, ebe, ma eleghị anya okwu a na-ekwu na ọhụụ oge, aha egwu ị chere na ị chefuola, na ihe ndị ọzọ.
Nnyocha na-egosi na Noopept ntụ ntụ nwere ihe ndị dị elu na-adịghị na ya. Mmetụta nke eriri ụkwụ nke mgbatị ahụike na-egbochi mmebi na apoptosis na ụbụrụ mmadụ. Ọtụtụ ndị ọrịa na-ebute ụbụrụ na-emetụta ụbụrụ mgbe nile nwere ike irite uru site na usoro ọgwụgwọ ọ bụla nke Noopept raw powder iji gbochie ọrụ ndị ọzọ na-arụkọ ọrụ.
NGF dịkwuo elu
NGF (Nerve Growth Factor) bụ protein pụrụ iche n'anụ ahụ nke na-agụnye uto, mmezi, na nlanarị nke mkpụrụ ndụ akwara, gụnyere sel ụbụrụ. A na-elekwa NGF anya dị ka ihe dị mkpa n'ime neurogenesis, ikike nke ahụ gị ịmepụta sel ọhụrụ.
Site n'inwekwu NGF n'ụbụrụ, anyị na-akwado usoro mmemme nke na-eme ka mmepụta ihe dị n'ime ụbụrụ na-emewanye, na-enye ohere maka njikọ ọhụụ ọhụrụ. Ihe ọ pụtapụtara pụtara ịmalite inwe ikike iche echiche nke ọma n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nile nke cognition.
Onu ogugu nke BDNF
BDNF (Ụbụrụ Neurotrophic) - bụ protein ọzọ na-arụ ọrụ yiri NGF ahụ a kpọtụrụ aha n'elu. A na-ewere BDNF dị ka otu n'ime ihe ndị dị mkpa dị na ncheta, na-arụ ọrụ dị mkpa na nchịkọta ncheta oge na ogologo oge.
Mee ka mmekọrịta dị n'agbata Brain Hemispheres
Ma akụkụ aka nri na aka ekpe nke ụbụrụ nwere ọrụ nke aka ha. Site n'iji Noopept ntụ ntụ mee ihe, ọrụ ọ bụla a nwere ike ịmekwu site na njikọ nke iche iche iche, echiche, na mmepụta. Enwere nuances n'etiti ọrụ ndị a na-eme ka ụzọ anyị si eche echiche. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ji kwuo na ụdị ndụ ha nwere dị mma site n'iji Noopept ntụ ntụ mee ihe mgbe niile.
Noopept powder (CAS 157115-85-0) na-arụ ọrụ
Ndị ọrụ nke Noopept powder report results of better clarity, better memory, and focus. Achọkwuru ọmụmụ ihe iji chọpụta kpọmkwem otú Noopept powder si eme ka uru ya baara ụbụrụ mmadụ. Nnyocha banyere ụmụ anụmanụ egosiwo na Noopept ntụ ntụ mụbaa ọrụ alpha / beta1 na mpaghara ụbụrụ niile.
N'ime mmadu, dabere na nlekota oru, nyocha nke a na-achịkwaghị achịkwa, Noopept ntụpụ gosipụtara uru dịghachi ndụ maka ndị ọrịa nwere nkwarụ dị nro. Ugbu a, Noopept raw powder mbadamba na-enwe nlele ahụike dịka ụzọ si emeso ụkọ obi nke post-traumatic sitere na cerebrovascular kpatara. Ufuru ụbụrụ na-enweta site na omume antioxidant, ihe ndị na-egbochi ndị na-egbu egbu, na nkwụsị nke toxicity na mkpochapụ nke glutamate na calcium. A chọpụtakwara na ọ dị mma ịmịnye ọbara na mmiri.
N'ịbụ nke a na-ekwu n'ezoghị ọnụ, ọ bụ usoro nchịkọta ahụ ka Noopept powder na-etinye ya na ya ma jiri nwayọọ nwayọọ gafere ọnyà ụbụrụ ọbara. Mgbe a na-enye ya n 'ụbụrụ kwesịrị ekwesị, ụbụrụ ya na-eme ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ya kpamkpam, ọ dịkwa ntakịrị ka o bibiri. Ntube noopept na-elekwasị anya saịtị ndị na-enweta glutamate ebe a kwenyere na ọ ga-ejikọta ya na glutamate ma mebie mmebi. Glutamate, ịbụ otu n'ime ndị na-ahụ maka ume igwe kachasị ike, na-akwado ma gbasaa arụ ọrụ na-arụ ọrụ.
Ngwunye noopept na-eme ngwa ngwa ozugbo ọ dị n'ọbara, na-eme ka ọnyà dịkwuo oke mgbe naanị 15 gaa na 20 nkeji. Ndị na-akwado akụkọ akụkọ ahụ na-egosi na idei mmiri doro anya nke uru nke ọzọ ikuku oxygen na ụbụrụ na ụba glucose dị mma. Ọtụtụ ndị mmadụ na-akọ ọhụụ dị mma ma na-ahụ nkọ, ọtụtụ agba agba. Ndị ọzọ ekwudịrịrị ịmalite ịmụrụ ihe na-esote oge dị mkpirikpi oge.
Noopept ntụ ntụ bụ mgbakwunye nootropic nke a na-enweta ọtụtụ anya n'oge na-adịbeghị anya. O nwere njikọ chiri anya nke ezumike nke racetam ndị mara mma bụ ndị a maara maka uru ha bara na ikike nke uche na ngwaahịa ha. Ihe na-eme Noopept raw ntụ ntụ karịsịa pụrụ iche pụrụ iche nootropic na ngwá ọrụ gị bụ na mmetụta ya dị ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na emetọchara ya ozugbo.
Ọtụtụ nootropics nwere ike were ụbọchị, izu, ma ọ bụ ọbụna ọnwa, maka mmetụta zuru oke ha nwere ịgba ma Noopept raw ntụ ntụ bụ akụkọ ọzọ. Ihe ọzọ nootropic na-atụnyere na mmetụta Noopept ntụ bụ ozugbo bụ phenylpiracetam.
Ka ọ dị ugbu a, a na-edezi Noopept raw ntụ ntụ ma kesaa na Russia na obodo ndị gbara ya gburugburu n'ihi ihe ndị na-adịghị na ya. Ihe a na-ewu ewu na-arịwanye elu ma na-ekesa ugbu a n'ụwa nile.
Enweghị ntụpọ noopept dị ka nootropic na-ejikarị tụnyere piracetam na aniracetam. Ọ na-arụ ọrụ site na usoro yiri ya dị ka piracetam ma a na-eme atụmatụ ịbụ 1,000 ka 5,000 ugboro karịa. Nnukwu ike ya apụtaghị na mmetụta ya dị omimi; ọ na-adọrọ onwe ya mma karịa ndị nabatara ụbụrụ ya, n'ihi ya kwa, a ga-ewere Noopept raw ntụ ntụ na obere obere usoro iji mepụta mmetụta yiri nke Piracetam.
Azu noopept dịkwa oke ala ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ndị ọzọ nootropics n'ihi na ọ dị ike maka milligram. Mmetụta dị irè na ọnụ ala ya maka ọgwụgwọ ọ bụla mere ka ọ bụrụ ihe kachasị mma n'etiti obodo nootropic.
GVS-111 Ntụ ntụ ntụ
Noopept (GVS-111) ntụ ọka
Ndi Noopept ntụ ntụ nwere mmetụta ọ bụla
Maka mmetụta nile dị mma nke Noopept ntụ nwere ike inwe na ahụ ike gị, ọ bụ naanị ole na ole na-egosi obere mmetụta dị mkpa nke a ga-edere dị ka isi ọwụwa, nkwụsịtụ, dizziness, na mgbakasị. Ndị a bụ ndị a na-ahụkarị mgbe Noopept raw powder na-ewere na akwa doses.
Ihe omuma atu na-enyekwa aro na Noopept ntụ ntụ nwere ike ime ka mmetụta nke stimulants dị ka amphetamines pụta, ya mere a dụrụ ọdụ.
Esi zụta GVS-111 ntụ ntụ: zụta Noopept ntụ ntụ si AASraw